I-Casa de Mirão - I-Airbnb
I-Casa de Mirão
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRafael
Indlu enendawo yokuphola ekwifama yaseSantana, ngaselunxwemeni loMlambo iDouro. Kulungele ukuphumla kwindalo, wonwabele indalo uze wonwabele umlambo, kunye nokuzonwabisa ngokulima. Ime kwimizuzu emihlanu ukusuka kwidolophana yaseSanta Marinha do Zêzere kwaye yimizuzu emihlanu ukusuka kwisikhululo sase-Ermida.
Indlu enendawo yokuphola enendawo yokuphola kunye negadi, elungele iindawo zokubraya emva kwemini, kunye noMlambo iDouro njengendawo engasemva, ngaphantsi komthunzi ohlaziyayo wemithi ye-cork. Ngemini efudumeleyo, unokonwabela ulwandle oluhle lomlambo, onokuya ngqo kuloo ndlu, apho unokuphola khona, uziqhelanise nokuzonwabisa ngephenyane okanye intlanzi.
Unyaka wonke, unokuphila amava asezilalini, usebenzisana kwizinto zokulima zale ndlu, ezisusela ekuveliseni ikherry ukuya ekuveliseni ubusi.
Ikwanesiphaluka esihle, esilungele ukuhambahamba, apho ungashiya khona indawo yokuhlala, udlule ebhankini yomlambo, uphumle kwisibheno (isikhululo esincinci) saseMirão, ngaphambi kokuba uqale ukunyuka uye kwindlela entle. Kwindawo ephakamileyo kule ndawo, ungabona iibhokhwe kunye nokufuya kwabantu bomthonyama, uphelise uhambo lwazo kwindawo ebonwa kakhulu kuloo ndlu.
Inombolo yomthetho: 69084/AL